सूचना-प्रबिधि Archives - Page6of 18 - Samudrapari.com
काठमाडौं - अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सीसीटीभी प्रविधि लागु गरिने भएको छ । भिडियो म्यानेजम्यान्ट सफ्टवेयर (भीएमएस) जडित सीसीटीभीले फरार अभियुक्त तथा अपराधी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआईजी बमबहादुर भण्डारीले बताउनुभएको छ । ‘यस्तो सफ्टवेयरमा अभियुक्तको फोटो राखिन्छ । यो सफ्टवेयरसँग जोडिएका सीसीटीभीमा ती अभियुक्त देखिए सीसीटीभीले डिटेक्ट गरेर सूचना दिनेछ,’ एआईजी भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि अभियुक्त तथा अपराधी पक्राउ गर्न सह...
तयार भयो एन्ड्रोइड अक्टोपस ८, यस्ता छन विशेषता
काठमाडौं - अन्ततः गुगलले आफ्नो नयाँ एन्ड्रोइड भर्सन एन्ड्रोइज अक्टोपस ८ को काम पूरा गरेको छ । हालै यो एन्ड्रोइड भर्सनको चौथो तथा अन्तिम प्रारुप लञ्च गरिएको छ । यद्यपि, यो भर्सनका महत्त्वपूर्ण फिचरहरु लिक भइसकेका छन् । एन्ड्रोइड ओ लाई एन्ड्रोइड अक्टोपस भनिनेछ । यहीँ अगष्ट महिनामा एन्ड्रोइड अक्टोपस आधिकारिक रुपमा रिलिज गरिनेछ । पहिलो डेभलपर प्रिभ्यूमा जुन जुन फिचर्स देखाइएको थियो ती चौथो तथा अन्तिम प्रारुपसम्म आइपुग्दा केही ठूलो सानो परिवर्तन गरिएको छ । एन्ड्रोइड ८ अक्टोपसको अन्तिम प्रारुपमा...
काठमाडौं – जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको ‘हेलो सरकार’ लाई अब सरकारी ‘कल सेन्टर’को रुपमा परिणत गरिने भएको छ । हेलो सरकारबाट तुरुन्तै जनताका गुनासा सम्बोधन नभएपछि कल सेन्टरमार्फत जनताका गुनासा प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नका लागि पठाउन थालिएको हो । गुनासो प्रत्यक्ष सम्बन्धित अधिकारीलाई सुनाई प्रत्यक्षरुपमा सर्वसाधारणलाई नै सम्बोधन गर्नका लागि ल्याउन ‘कलसेन्टर’ ल्याउन थालिएको ‘हेलो सरकार’ कार्यक्रमका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी गराउनुभयो । कलसेन्टरबाट सर्वसाधारणले आफ्नो...
काठमाडौं - नेपाल टेलिकमले आजबाट आफ्ना विभिन्न सेवामा ग्राहकलाई विशेष छुट दिएको छ । उसले जिएसएम-सिडिएमए तथा एडिएसएल÷एफटिटिएच सेवाका ग्राहकका लागि ‘प्रमोसनल अफर’ उपलब्ध गराएको हो । अब विदेशबाट आएको कल उठाउँदा पनि बोनस प्राप्त गर्न सकिने छ । यो अफर आगामी ९० दिनसम्म उपलब्ध गराइने टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो । यो अफरअन्तर्गतको सेवा पुराना ग्राहकलाई समेत उपलब्ध हुनेछ । अब एक एमबिपिएससम्म गतिको एडिएसएल इन्टरनेट करसहित मासिक रु एक हजारमा उपलब्ध हुनेछ । पहिला मासिक एक हजार १७ मा...
काठमाडौं - गुगलले आफ्नो तत्कालै सर्च गर्ने इन्स्टेन्ट सर्च फिचर बन्द गर्दैछ । जब तपाईं सर्च बारमा आफुले सर्च गर्न खोजेको केही शव्द लेख्नुहुन्छ तब ड्रप डाउन मेनूमा सर्चसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरु देखापर्दछन्, त्यो नै इन्स्टेन्ट सर्च हो । तर अब यो फिचर गुगलले बन्द गर्न लागेको छ । गुगलका अनुसार अब धेरैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले डेस्कटपको साटो मोबाइलबाटै सर्च गर्दछन् । त्यसैल इन्स्टेन्ट सर्चको खासै आवश्यकता रहेन । स्मरण रहोस् गुगलले सन् २०१० मा इन्स्टेन्ट सर्च फिचर लञ्च गरेको थियो । तर सन् २०...
काठमाडौं - वर्तमान समयमा मोबाइल फोन मानिसको जीवनशैली बनीसकेको छ । मानिस बिहान आँखा खुलेदेखि राती आँखा बन्द नहुन्जेलसम्म हरेक पल मोबाइलको साथमा रहन्छ । रातीसुत्दा पनि ओच्छ्यानमै मोबाइल राखेर सुत्ने बानी सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विद्युतिय सामान जुनसुकै बेला पनि खतराको संकेत हो । यसलार्इ संयमित भएर प्रयोग गर्न जानिएन भने यसबाट ठुलो जोखिम निम्तिन सक्छ । मोबाइल पनि विद्युतिय सामान भएकोले राती सँगै लिएर सुत्दा ज्यानै जानेसम्मको खतरा हुन्छ । चीनको इन्स्टिच्युट अफ एनबीसी डिफेन्स एण्ड सिन्गुहा युनिभर्...
काठमाडौं – समाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकको दोश्रो त्रैमासिक नाफा ७१ प्रतिशतले बढेको छ । फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरवर्गले यो बर्षको पहिलो तथा दोश्रो त्रैमासिकमा कम्पनी ठूलो नाफामा गएको जनाएका हुन् । अप्रिलदेखि जुनसम्मको समयावधीमा कम्पनीको नाफा बढेर ३९ करोड डलर पुगेको छ । यस्तै कम्पनीको राजश्व समेत ९३ करोड डलर पुगेको छ । विभिन्न कम्पनीहरुले फेसबुकमार्फत विज्ञापनका लागि ठूलो रकम खर्चने गरेकाले नाफा बढेको बताइएको छ । फेसबुकले धेरैभन्दा धेरै विज्ञापनदाता तथा उपभोक्तालाई आवद्ध गराएर आम्द...
एक चौथाइ नागरिक गरिब भएको मुलुकमा मोबाइलमा दैनिक १८ करोड खर्च !
काठमाडौं – झन्डै एक चौथाइ नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका मुलुकमा दैनिक कम्तीमा १८ करोड रुपैंयाँ मोबाइलमा खर्च हुने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । मुलुकमा दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये एक नेपाल टेलिकमका मोबाइल ग्राहकले एक दिनमा नौं करोड रुपैंयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । टेलिकमका अनुसार उसलाई गत आवको नौ महिनामा मोबाइल रिचार्जमा २४ अर्व ३८ करोड रुपैंयाँ आम्दानी भएको छ । यो दैनिक औसत नौं करोडभन्दा बढी हो । अर्को ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको बार्षिक आम्दानी हेर्दा ग्राहकले अझै ...
जुलाई ३१ मा नोकिया एट आउँदै, यस्ता छन् विशेषता !
काठमाडौं - नोकियाले नोकिया थ्री, नोयिक फाइभ तथा नोकिया सिक्स स्मार्टफोन लञ्च गरिसकेको छ । नोकियाका उपर्युक्त फोनसेटहरुले प्रयोगकर्ताहरुबाट राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेका छन् । अब चाहीँ नोकियाले उच्च मूल्य तथा गुणस्तरको नोकिया एट ल्याउँदैछ । नोकिया ब्राण्डको स्वामित्व लिएको एचएमडी ग्लोबलले नोकिया एट स्मार्टफोन लञ्च गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ । खबर अनुसार आगामी जुलाई ३१ मा नोकिया एट लञ्च हुनेछ । जर्मन वेबसाइट विनफ्यूचरका अनुसार नोकिया एट आगामी जुलाई ३१ मा लञ्च गर्ने तयारी छ । यसअघि नोकिया...
हराएको मोबाइल अब आफै खोज्नुहोस् (सजिलो तरिका)
काठमाडौं - अहिले महंगा मोवाइल प्रयोग गर्ने एक प्रकारको फेसन नै बनेको छ । साथै मानिसहरुले मोवाइलाई बहुउपयोगी साधानका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् । मोवाइलमा फोन नम्बर मात्रै हैन, जिन्दगीका कतिपय अविस्मरणीय पल पनि राखिएका हुन्छन् । जब मोवाइल हराउँछ एकतर्फ पैसाको क्षति हुन्छ भने अर्कोतर्फ मोवाइलमा रहेका उपयोगी सामग्री नष्ट हुन्छन् । तरपनि मोबाइल हराउने खतरा जहिले पनि हुन्छ । यस्तोमा हराएको मोबाइल कसरी फेला पार्ने रु यो आलेखमा हराएको मोवाइल फेला पार्ने उपयोगी उपाय उल्लेख गरिएको छ । यो उपायले एन्ड्र...